अस्पतालमा आ’गो लाग्दा ८ कोरोना संक्रमितको निधन – Online Nepal Site
अदालतबाट हराए पनि जनताको अदालतमा केपी ओलीलाई हराउन संभव छैन
विदेशबाट फर्किएका श्रीमानले आफ्नै २ वर्षीय छोराकी आमालाई जे गरे …
यस्तो छ तपाईको बिहिबारको भाग्य, फागुन १३ गतेको राशीफल हेर्नुहोस्
ट्राफिक चेकिङ छल्न ख‍ज्दै गरेेेकि महिलाको बसको ठक्करबाट ज्यानै गएपछि …
लाहुरेको भन्दा अझ डरलाग्दो का’ण्ड नेपालगन्जको खजुरामा घ’ट्यो, ना’ठो सङ्ग यस्तो अबस्थामा श्रीमती (हेर्नुस् भिडियो)
तपाईको बुधवारको भाग्य यस्तो छ, पाथिभरा माताको दर्शनगरी फागुन १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस्
शियर ,,गरौ:आफ्नो मृ,तक दाईको,, न्या’यको लागि एक्लै प्रहरी प्रसाशनसंग ल’ड्ने यी चेलीको शाहस प्रति सलाम
पूर्व आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल पार्टी प्रवेश गर्दै, आगामी बैशाखमा चुनाव लड्ने तयारी
बधाई ! जितेको पैसाले गाउँमा पक्की सडक बनाउने ‘बिग बोस सिजन १४’ की विजेता रुबीनाको घोषणा
मुख्य पृष्ठ /International/अस्पतालमा आ’गो लाग्दा ८ कोरोना संक्रमितको निधन
अस्पतालमा आ’गो लाग्दा ८ कोरोना संक्रमितको निधन
काठमाडौं । कोरोना पोजेटिभ देखिएकाहरुलाई उपचारका लागि भन्दै बनाईएको कोभिड अस्पतालमा आ’गो लाग्दा भारतमा ८ जनाको निधन भएको छ । भारतको गुजरात राज्यमा कोरोना संक्रमितहरुलाई राखिएको एउटा अस्पतालमा आ’गलागी हुँदा आठ जनाको निधन भएको भारतीय मिडियाले जनाएका छन् ।
अहमदाबादको नवरंगपुर क्षेत्रमा भएको उक्त घटनामा मृतकमध्ये तीन जना महिला भएको बीबीसी हिन्दीले उल्लेख गरेको छ। अहमदाबादका एक वरिष्ठ अधिकारीले स्थानीय श्रेय अस्पतालमा बिहान ३ बजेतिर आ’गो लागेको बताएका छन्।
अस्पतालको बिजुलीको शर्ट सर्किटका कारण आ’गो लागेको बताइएको छ। एक घण्टामा नै आ’गो निय’न्त्रण आएको थियो। उक्त अस्पतालबाट उद्धार गरेर कोभिड पुष्टि भएका ४० बिरामीलाई अर्को अस्पतालमा सारिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।
भारतमा ‘कोभिड १९’ सङ्क्रमितको सङ्ख्या १९ लाख नाघेको बुधबार जनाइएको छ । गत २४ घण्टामा भारतका ५२ हजार ५०९ जनामा कोरोना भाइरस पोजेटिभ देखिएपछि कुल सङ्क्रमितको संख्या १९ लाख ८ हजार २५४ पुगेको त्यहाँको केद्रिय स्वास्थ्य मन्त्रालयले बुधबार जानकारी दिएको छ ।
भारतमा गत २४ घण्टामा कोरोना भाइरसका कारण ८५७ जनाको निधन भएपछि कूल निधन हुनेको संख्या बुधवार सम्म ३९ हजार ७९५ जना पुगेको छ ।
सरकारी अधिकारीका अनुसार भारतमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितमध्ये बाह्र लाख ८२ हजार २१५ व्यक्ति निको भएर फर्किएका छन् । भारतमा मङ्गलबार कोरोना भाइरस निको हुने क्रम ६६।३० प्रतिशतले बढेको पाइएको छ । हाल भारतमा पाँच लाख ८६ हजार २४४ जना कोरोना भाइरस सङ्क्रमित अवस्थामा रहेका छन् ।
भारतको महाराष्ट्र सबभन्दा प्रभावित बढी कोरोना फैलिएको राज्यका रुपमा रहेको छ । कोरोना भाइरस प्रभावित भारतको दोस्रो राज्य तमिलनाडू र तेस्रोमा राजधानी शहरसमेत रहेको दिल्ली राज्य रहेको छ ।
भारतमा अर्को ठूलो शोक, दुनियाँकै मनमा बसेकी अभिनेत्री दिव्यको अल्पआयुमै मृत्यु
हिरोइन भन्दा कम छैन’न् विश्व’कै धनी विल गेट्सकी छोरी, तर उनको जीवन सैली र रुची चाहिँ अचम्मको!
हजारौं मानिसको कोरोना परिक्षणको नक्कली प्रमाण पत्र दिने अस्पताल सञ्चालक पक्राउ
सुपरस्टार सलमान खानका फ्यानहरुका लागि आयो यस्तो दुःखद खबर